MakeWebBetter: Vaka uye Ikure Yako Ecommerce Bhizinesi neWooCommerce neHubspot | Martech Zone
Iko hakuna kusahadzika kusvika kure kwe Hubspot seCRM uye yekushambadzira otomatiki chikuva uye WordPress seContent Management System. Nekuti iri nyore plugin uye wedzera-on, WooCommerce yanga ichikura mukuzivikanwa se ecommerce chikuva chekushandisa nyore.
Nepo WordPress yaburitsa iri yayo CRM, chikuva chinoshaya kukura kwe Hubspot nekuda kwekugona kwayo kutyaira maitiro kune ekuwana uye ekuchengetedza matipi esangano. Hubspot's inokwanisika coupling yevatengi hukama manejimendi (CRM) uye kushambadzira otomatiki kunoita kuti ive huru chikuva chekushandisa pane imwe kambani iri kushandura nzira dzayo dzekutengesa dzinoverengeka nemaitiro.
Kune rimwe divi reiyo equation, Hubspot'' CMS haina kukura seWordPress, uye haina kupihwa chero mhando yekambani ecommerce mhinduro. Kana bhizinesi rako richida zvese zvakanakira CRM, ecommerce mhinduro, uye kushambadzira otomatiki… uchafanirwa kubatanidza. Ndinofara, Hubspot uye WordPress vane zvine simba zvekubatanidza maficha uye yakapararira migove yemusika kuti kune mhinduro dzekusarudza kubva pane idzo hunyengeri.
MakeWebBetter: Hubspot uye WooCommerce
Kambani yangu inobatsira kuisa nekubatanidza mhinduro… uye chayo chinhu chinodhura. Kuhaya vanachipangamazano uye zviwanikwa zvekuvandudza zvinogona kudhurira kambani mazana ezviuru zvemadhora - tisingataure nezvekuenderera mberi kwekugadzirisa uye zvinowedzerwa zvinowanzodiwa. Nekuda kweizvozvo, chinhu chekutanga chatinoita isu sevanachipangamazano kutsvaga mhinduro dzakagadzirwa dziri kutogamuchirwa uye dzine mukurumbira mukuru.
MakeWebBetter ndeimwe yemakambani… kwete chete timu yevanogadzira mapulagi, asi iyo agency inobatsira kuita uye kusevha Hubspot uye WordPress vatengi. Ivo zvakare Nhengo yeGoridhe yeiyo Hubspot Mhinduro Partner Chirongwa. Mune mamwe mazwi, vane zviwanikwa zvakatsaurwa zvekuramba vachivandudza, kugadzirisa, uye kugadzirisa mhinduro dzavo.
Yakanangana ne Hubspot uye WooCommerce, plugins avo uye zvekuzvipira zvevhisi zvinobatsira iwe kuti ubatanidze iwo maviri data sosi, kupfuudza iyo ecommerce chiitiko kudzoka ku Hubspot, uye ita kuti iyo data iwanikwe kune yakasarudzika, yakakamurwa yekushambadzira kutaurirana kuti ibatsire kutyaira shanduko uye kusimudzira mikana.
Maitiro Ekubatanidza Hubspot uye WooCommerce
MakeWebBetter's Hubspot uye WooCommerce kusangana kunogona kuwanikwa mu 5 matanho akakosha:
Unganidza WooCommerce yako yekutengera ngoro KuHubSpot
Sarudza minda yako nemapoka etsika kuti ubatanidze kuHubSpot
Chikamu chako chinotungamira ne Hubspot'S Smart Chinyorwa uye kudzokorora, kuwanda, uye mari (RFM) Chikamu.
Bvumira prebuilt ecommerce kushambadzira mafashama mukati Hubspot kutyaira shanduko.
Vaka mishumo yekufungidzira kutengesa kwako uye bhizinesi kukura.
Yakavakirwa Ecommerce kushambadzira mafashama anosanganisira:
Vakasiirwa Ngoro Kudzoserwa Kufamba - Inokubatsira kuti utore ngoro dzakasiiwa uye inoita kuti vatengi vako vapedze kutenga kwavo nateedzero emaimeri, vachipa madhikoni ekudzikisira.
Gamuchirai Vatengi Vatsva & Gamuchirai 2 Order Kuyerera Kufamba - Iyi email inokonzeresa mushure mekutenga kwekutanga uye yakagadzirirwa kupa vatengi vako zvemukati zvinobatsira zvinovafadza.
Dhizaini MQL Shanduko Yekufambisa Kufamba - Uku kufambiswa kwebasa kuchakubatsira iwe kusimudzira kushambadzira inokwenenzvera inotungamira (MQLs) yechitoro chako. Inotarisa pakushandura zvinotungamira kune vatengi. Kufamba kwebasa uku kunozogadzira otomatiki akateedzana emaimeri uye nekuvatumira kuMQLs panguva yakakodzera.
ROI Kuverenga - Kufamba kwebasa uku kunobatsira pakuverenga iyo Return On Investment (ROI) yemakambani akasiyana ekushambadzira akadai seMQL Kukura, Gamuchira Mutengi Nyowani uye Gamuchira 2nd Order zvichingodaro.
Tevera Kurera - Kazhinji, kufuratirwa. zvakadaro, zvinonyanya kukosha. Chishoma chinotarisisa kufambiswa kwemabasa chakagadzirirwa kukuchengetedza iwe kubatana nevatengi vako mukati merwendo rwese rwevatengi. Nhevedzano yekutevera maemail ane ruzivo rwakakosha, madhiri, nezvimwe Uye zvimwe zvakawanda.
MakeWebBetter Hubspot uye WooCommerce WordPress Plugins
Hubspot WooCommerce Kubatanidza Pro - yekutengesa ine simba uye kushambadzira otomatiki mhinduro, iyo inobatsira eCommerce Marketers kushandura inotungamira kuva vatengi. Iyo yakagadzirira-kushandisa-software mhinduro iyo inogona kusanganisa WooCommerce (inotungamira e-commerce chikuva mumusika unofukidza 30% yemawebhusaiti ese) neHubSpot. HubSpot inyanzvi yekushambadzira otomatiki chishandiso cheWooCommerce.
Tanga na Hubspot uye WooCommerce Kubatanidzwa
Hubspot Sync WordPress Mushandisi - Gadzirisa maitiro ekuenzanisa ese ako mutengi ruzivo kuHubSpot yekukurumidza kuwana uye inoshanda sarudzo yekuita maitiro. Nemunda kuMunda Kubvumirana kweHubSpot, unogona mepu nyore nyore HubSpot yekudyidzana zvivakwa uye nevashandisi veWordPress minda.
Hubspot WooCommerce Yakasiiwa Kutenga Ngoro Kudzoserwa - dzosera kutengesa kwakasiiwa kwe WooCommerce chitoro chako nekutumira otomatiki zviyeuchidzo zveemail kune vatengi vako, avo vakasiya yako e-chitoro vasina kupedzisa kutenga.
HubSpot Tora Quote - yese-in-imwe yekushambadzira mhinduro inokupa iwe nzvimbo yepakati yekubatana neako anogona kutungamira, gadzirisa yako makotesheni echikumbiro uye uchishandure ivo vatengesere, chaipo kubva kuHubSpot CRM yako (yakasimba kwazvo CRM) uye zvakare, seta-yayo yekutevera. nzvimbo.
HubSpot Deals yeWooCommerce Nhengo - inoita kuti iwe ugone kuronga yako saiti mitezo seHubSpot inobata neyakakodzera dhizaini danho, zvirongwa uye mazuva ekuvhura nekuvhara.
HubSpot Deal Pamushandisi - inobvumira vashandisi kushandura iyo inogona kutengeswa kuita HubSpot madhiri ane akakodzera dhizaini danho, otomatiki mafirifomu, huwandu, uye zuva rekuvharaTarisa chigadzirwa chako kuverenga, kutengesa uye mari kuburikidza neE-commerce Pipeline uye WooCommerce Sales Pipeline pane ichangobva kugadzirwa E-commerce Insights Dashibhodhi
HubSpot Dynamic Coupon Code Chizvarwa - smart smart-in-one solution iyo inogadzira auto-yakatarwa Dhijitoni coupon macode anonunura kamwe chete, zvichibva pane ako vatengi eazvino HubSpot RFM ratings.
Tarisa uone Zvese MakeWebBetter Zvigadzirwa neMasevhisi
Tags: yakasiya ngoro yekutengerayakasiya email yekutengeraCRMecommerce kushambadzira otomatikimaitikirohubspotHubSpot CRMmakewebKushambadzira anokwanisa anotungamiramarimqlkuraira kunotungamirakukurudzira kufambiswa kwebasaPersonalizationkudzokororakudzokorodza frequency marirfmrfm chidimbuRoyiroi kufambisayechipiri odha yekufambisazvikamuyekutengesa ngoro kusanganarunyorwa runyorwawelcome emailwoocommerceWordPressWordpress plugin
Maitiro Ekutora Iyo Webhusaiti Screenshot Neakananga Matanho Uchishandisa Google Chrome